Landa imvelo ephezulu yencazelo v2.1 FSX & P3D - Rikoooo
I-High Definition Environment v2.1 FSX & P3D
Usayizi 20.4 MB
Play 49 279
Umbhali: Umbhali woqobo uPablo Diaz, FSX ukuvuselelwa nguDanny Glover no-Erik Bender (Rikoooo)
Okusha! HDE v2.1 (kwencazelo eliphezulu imvelo) isithombe-namaqiniso HD ukuthungwa iphakethe ezokwenza ngcono ukubukeka amafu wakho (Cumulus, Stratus, Cirrus), isibhakabhaka umbala nemininingwane phansi.
Ukufakwa ngokuzenzekelayo / khipha ngokusekela futhi ubuyisele ukuthungwa kwakho kwangempela. Iyahambisana nawo wonke ama-simulators endiza asuselwa ku- FSX (Prepar3D kanye ne-Steam Edition). Inguqulo 2.0 kuya ku-2.1 nguRikoooo. Ungalokothi isibhakabhaka sendiza yakho yendiza sibe ngokoqobo, ubheke amafu ngokulungiswa okuphezulu, imininingwane yendawo ethuthukisiwe (amakhambi)
I-HD Jetway ne-Airport Parking FSX & P3D
Umgwaqo we-REX nomgwaqo omkhulu FSX & P3D
Ukushintshwa Kwendawo Yokulungisa Inyanga ye-HD FSX & P3D 3.0
Ukulungiswa Kwemvula ye-VC FSX